၂၀၂၁ ခုနှစ်ထဲမှာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်အိမ်အမျိုးမျိုးနဲ့ စံချိန်တင် K-drama ​ကောင်းများစွာထွက်ရှိခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိ ပြသဖို့ ကျန်ရှိ​နေတဲ့ ဇာတ်လမ်း​ကောင်း​တွေလည်းရှိပါတယ်။ ယခုနှစ် K-drama ​လောကမှာ ထူးခြားတာတစ်ခုက​တော့ ယခင်ကထက်စာရင် Idol ​​တော်​တော်များများကို ဇာတ်လမ်း​တွေထဲမှာ ​​တွေ့လာရတာပါပဲ။
တချို့​တွေက​တော့ Idol ​တွေဟာ သရုပ်​ဆောင်​ကောင်းမှာမဟူတ်ဘူးလို့ ထင်နိုင်​ပေမဲ့ သူတို့မှာ အံ့မခန်းသရုပ်​ဆောင်စွမ်းရည်​တွေရှိ​နေကြပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ထူးချွန်တဲ့ သရုပ်​ဆောင်စွမ်းရည်ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကို အံ့အားသင့်​စေခဲ့တဲ့ Idol ၅ ဦးရှိပါတယ်။ သူတို့​တွေက​တော့
1. 2PM အဖွဲ့ဝင် Taecyeon (Vincenzo)
‘Vincenzo’ ထဲက Taecyeon ရဲ့ သရုပ်​ဆောင်ချက်​တွေက​တော့ ​ပြော​နေစရာကို မလို​တော့ပါဘူး။ သူဟာ နဂိုတည်းက သရုပ်​ဆောင်အ​တွေ့အကြုံလည်း အများကြီးရှိပြီးသားမို့ မာယာများတဲ့ ဒီဇာတ်​ကောင်ကိုလည်း အ​ကောင်းဆုံး သရုပ်​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
‘Vincenzo’ ထဲက သူ့ရဲ့ ဇာတ်​ကောင်ကို တခြားသရုပ်​ဆောင်တစ်​ယောက်နဲ့ အစားထိုးပြီး မြင်လို့မရနိုင်​လောက်​အောင် သူ့ရဲ့ သရုပ်​ဆောင်ချက်​တွေက ဇာတ်ကားပြီးဆုံးထဲအထိ ကြည့်ရှုသူ​တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ စွဲကျန်​နေခဲ့​စေပါတယ်။ ယခုနှစ် နှစ်ကုန် Drama ဆု​ပေးပွဲ​တွေမှာ သူ့ရဲ့ ​ကြိုးစားမှုအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုပြန်လည်ရရှိမယ်လို့ ​မျှော်လင့်ပါတယ်။
2. GOT7 အဖွဲ့ဝင် Jinyoung (The Devil Judge)
‘The Devil Judge’ ထဲက GOT7 အဖွဲ့ဝင် Jinyoung ရဲ့ ဇာတ်​​ကောင် Kim Ga On ဟာ ထိုဇာတ်ကားရဲ့ အ​ကောင်းဆုံးဇာတ်​ကောင်​တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဇာတ်​ကောင်ဟာ တကယ် အ​တွေ့အကြုံရှိတဲ့ သရုပ်​ဆောင်​တွေ​တောင်မှ သရုပ်​ဆောင်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်။
ဒါ​ပေမဲ့ Jinyoung ဟာ Kim Ga On ရဲ့ နာကျည်းချက်​တွေ၊ စိတ်ဒဏ်ရာ​တွေ၊ ​အမုန်းအာဃာတ​တွေကို ပီပြင်​အောင် သရုပ်​ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့သလို တရားသူကြီး Kang Yo Han ရဲ့အကိုအဖြစ်လည်း ၂ ကိုယ်ခွဲသရုပ်​ဆောင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ကြည့်ရှုသူ​တွေအတွက် Kim Ga On နဲ့ Jinyoung နဲ့ကို ခွဲခြားလို့မရ​​လောက်​အောင် တစ်သားတည်းဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်။
3. Girls’ Day အဖွဲ့ဝင် Hyeri (My Rommate isaGumiho)
Hyeri ဟာ ‘Reply 1988’ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတည်းက သူမရဲ့ ​ပြောင်​မြောက်တဲ့ သရုပ်​ဆောင်ချက်​တွေနဲ့ ပရိသတ်​တွေရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သူပါ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ‘My Roommate isaGumiho’ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ဖန်သားပြင်​ပေါ်ကို ပြန်လည်​ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် လူကြိုက်အများဆုံး အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ webtoon ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တာ​ကြောင့် သူမဟာ မူလ webtoon ရဲ့ ပရိသတ်​တွေကို စိတ်မပျက်​စေပဲ Lee Dam ဇာတ်​ကောင်ကို အ​ကောင်းဆုံး သရုပ်​ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ကာ ပရိသတ်​တွေရဲ့ အချစ်ကို ထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ တကယ်လည်း Hyeri ဟာ Lee Dam ဇာတ်​ကောင်ကို သရုပ်​ဆောင်ဖို့ ​မွေးဖွားလာတယ်လို့ ထင်ရ​​လောက်​​အောင် လိုက်ဖက်လွန်းပါတယ်။
4. B1A4 အဖွဲ့ဝင် Jinyoung (Police University)
B1A4 အဖွဲ့ဝင် Jinyoung က​တော့ သရုပ်​ဆောင်အ​တွေ့အကြုံ သိပ်အများကြီးမရှိ​ပေမဲ့ လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်​နေဆဲဖြစ်တဲ့ ‘Police University’ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ သူ့ရဲ့ အံ့မခန်း သရုပ်​ဆောင်အရည်အချင်းကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ပုံမှန် မှုခင်းဇာတ်လမ်း​တွေနဲ့ မတူပဲ လက်​တွေ့ဆန်ဆန်နဲ့ အချစ်ဟာသ​လေး​​တွေပါသလို Jinyoung ဟာလည်း ‘Moonlight Drawn By Clouds’ ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်​ကောင်နဲ့ လုံးဝကွဲထွက်တဲ့ စိတ်​ကောင်းရှိပြီး ဇွဲကြီးတဲ့ ရဲ​ကျောင်းသားဇာတ်​ကောင်ကို ပိုင်နိုင်​အောင် သရုပ်​ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်​ဆောင်မင်းသမီး​နေရာမှာ သရုပ်​​ဆောင်ထားတဲ့ Krystal ကလည်း ​ပြောစရာမလို​လောက်​အောင် သရုပ်​ဆောင်​ကောင်းတဲ့ Idol-မင်းသမီးတစ်ဦးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းမျိုးနဲ့ အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကို​တော့ ဆက်လက်​စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
5. Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Sooyoung (So I Married An Anti-fan)
‘So I Married An Anti-fan’ ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မပြသမီတည်းက ​မျှော်လင့်​စောင့်စားသူ​တွေများခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ​ကြောင့်လဲဆို​တော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ မူလဝတ္ထုက နာမည်ကြီးသလို ဇာတ်လမ်းပြန်ရိုက်တာ​တွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့လို့ပါပဲ။
Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Sooyoung တစ်ယ​ောက် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် ပရိသတ်​ရှေ့ကို ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ​တော့ ပရိသတ်​တွေဟာ အရမ်းကို ​ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမဟာ Lee Geun Young အဖြစ် ပီပြင်စွာ သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး Girls’ Generation ပရိသတ်မဟုတ်တဲ့သူ​တွေကိုပါ သူမရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်လာ​​အောင် သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့သလို ချီးကျူးမှု​တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အ​​ပေါ်မှာ ​ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၅ ​ယောက်အပြင် ‘Imitation’ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ U-KISS အဖွဲ့ဝင် Lee Jun Young of U-KISS, T-ara အဖွဲ့ဝင် Park Ji Yeon, ATEEZ အဖွဲ့ဝင် Jongho, Yunho, San နဲ့ Seonghwa, SF9 အဖွဲ့ဝင် Chani နဲ့ Hwiyoung, of SF9, ‘Doom At Your Service’ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက SF9 အဖွဲ့ဝင် Dawon, ‘So I Married An Anti-fan’ ထဲက 2PM အဖွဲ့ဝင် Chasung, ‘The Devil Judge’ ထဲက Rainbow အဖွဲ့ဝင် Kim Jaekyung, ‘Blue Birthday’ ထဲက Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Yeri နဲ့ PENTAGON အဖွဲ့ဝင် Hongseok, ‘Police University’ ထဲက B.A.P အဖွဲ့ဝင် Youngjae, ‘Bossam: Steal the Fate’ ထဲက Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် Yuri နဲ့ ‘Yumi’s Cells’ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက SHINee အဖွဲ့ဝင် Minho တို့ဟာလည်း ယခုနှစ်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ဇာတ်​ကောင်​တွေကို ပီပြင်စွာ သရုပ်​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကို အံ့အားသင့်​စေခဲ့ပါတယ်။
Next BL Adaptation ကားတွေမှာ ပရိတ်သတ်တွေမြင်တွေ့လိုတဲ့ မင်းသားချော (၅) ဦး »
Previous « တည်ဆောက်ချင်မိတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မိသားစုဘဝလေးကို ပြောပြခဲ့ဖူးသူ Dilireba